Naqshadaynta iMac iyo "Mac Pro mini" oo uu saadaaliyay Jon Prosser inbadan oo naga mid ahna waxay rabaan | Waxaan ka socdaa mac
Naqshadaynta iMac iyo "Mac Pro mini" oo uu saadaaliyay Jon Prosser inbadan oo naga mid ahna ayaa doonaya
Naqshaddan cusub ee iMac iyo tan Mac Pro ee la yareeyay, qof kasta oo isticmaala Mac waa lagu guuleysan karaa Muddo dheer isbeddel naqshadeyn ayaa lagu xamanayay Apple iMac runtiina waa in kastoo ay aad u qurux badan yihiin ay iyaga ka dhigeyso qayb ka mid ah waxay u baahan tahay in la hagaajiyo, labadaba qaabkeeda iyo shaashadeeda.
IMac-kan hadda jira waa wax fiican laakiin dabcan, haddii Jon Prosser yimaaddo oo na tuso soo bandhigid waxa uu noqon karo iMac oo leh naqshad la mid ah shaashadda XDR Pro, way na qancinaysaa. Tani macquul ahaan waa xanta ku saleysan naqshadeynta suuragalka ah ee suurtogalka ah, waxba lama xaqiijin laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan ...
Fiidiyow cusub, Prosser, wuxuu ka hadlayaa waxa ku imaan kara iMac-kan oo daawashada madax-qabashada waxaad fikrad ka heleysaa waxa ay leedahay. Hal naqshad fidsan iyo midabbo, midabbo badan.
Laakiin sida dhammaan wararka xanta ah ee la bilaabay waxaa jira faahfaahino aan la arkin laakiin loo baahan yahay sida beddelka shaashadda ama baajinta jir ku yaal wejiga hore ee iMac-kan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxay umuuqataa in qaabeynta iMac-kan qof kastaa uu jeclaan karo maaddaama ay raacayso qadka iPad Pro, iPad-kii ugu dambeeyay iyo sida muuqata iPhone 12, oo leh dhinacyo gebi ahaanba fidsan.
Xantaas waxaa ka mid ah, Prosser wuxuu kaloo ka hadlayaa wax yar oo ka mid ah Mac Pro, laakiin xaaladdan anigu uma arko inay macquul tahay taasna waxaa ugu wacan in qaab-dhismeedka noocaan ah ee 'Mac' ay tahay inuu fure noqdo waana laga hor mari doonaa naqshadda shaki la'aan. Mac Pro waa kooxo loo sameeyay xirfadlayaal waana inay sida ugu badan uga faa'iideystaan ​​marba marka ka sii wanaagsan, marka waa muhiim in la cusbooneysiin karo sanadaha oo ay fududaan karaan in la sameeyo (ma ahan mid raqiis ah).
Xaaladdan oo kale Waxaan u maleynayaa in qaab xoogaa ka yar kan hadda jira ee Mac Pro lagu gaari karo laakiin kan ku jira sawirka sare wuxuu noqon karaa mid xad dhaaf ah oo dhib badan in la cusbooneysiiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Naqshadaynta iMac iyo "Mac Pro mini" oo uu saadaaliyay Jon Prosser inbadan oo naga mid ahna ayaa doonaya
Waxaan tijaabinay xarunta Choetech 4-in-1 ee iPad iyo MacBook
Dukaanka labaad ee Apple ee Seoul wuxuu albaabada u furi doonaa berri maalinta 26